ဘ၀ လက်တွဲဖော် ( ၃ ) | Layma's World
« ဘ၀ လက်တွဲဖော် ( ၂ ) အကြောင်းကြားစာ »
စိုးထက် - Soe Htet !, on February 4, 2008 at 6:34 pm said:
ထင်တယ် … ဘုရားရှိခိုးလည်း မမှီတော့ ဘူးလို့ 😛
အားတော့ ရေးတာပေါ့ ဗျာ 😛
စိုးထက် - Soe Htet !, on February 4, 2008 at 6:40 pm said:
မနေ့ကတောင် အမျိုးသမီးကို အဲဒီ ခေါင်းစဉ်က မျက်စပစ်နေပြီလို့ ပြောလိုက်သေးတယ် 😛
မောင်မျိုး, on February 4, 2008 at 7:20 pm said:
အောင်မငီး လုပ်ရက်ပါပေ့ တီလေးရယ်….တက်စ်ထားတာလိုက်သူတွေအများကြီးးပါပဲလားး….
ကျနော်က မူးလို့ ရှူစရာမရှိတာ ဘီလိုလုပ်ရေးရမတုန်းးးဗျ………….
ရေးဆိုတော့လဲရေးရမှာပေါ့လေ….တီလေးကလွယ်တာမှမဟုတ်တာ ကြောင်ကိုေ-ွးနဲ့ ခြောက်တော့ရေးရတော့မှာပေါ့။။။
ကြာမယ်နော့်….ကျနော့်အသဲကို သေချာမေးကြည့်အုံးမလို့း)
koatar, on February 4, 2008 at 8:37 pm said:
အမလေးဗျ တက် လိုက်တာ နည်းနည်းနောနော မဟုတ်ဘူး။ ဖတ်တဲ့သူတွေ လာတောင်းပါလို့ ပြောလောက်အောင် အမှန်အကန် သေချာကို ရေးလိုက်မယ်။ ဟဲဟဲ 😀
nu-san, on February 4, 2008 at 8:56 pm said:
လေးမရေ.. ငါ့ညီမလေး ကံကောင်းပါတယ်.. ကိုယ်က ချစ်တဲ့သူ၊ ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူနဲ့ ဆုံစည်းရတာကြောင့်ပါ။ မချမ်းသာပေမယ့် စိတ်မဆင်းရဲဖို့က အရေးအကြီးဆုံးပါပဲ။
လေးမတို့ ဇနီးမောင်နှံ သက်ဆုံးတိုင် ရွှေလက်မြဲမြဲတွဲပြီး ပျော်ရွှင်ပါစေလို့..
အင်း.. ထင်တော့ထင်သား လေးမရေ..ဒီရက်အတွင်း မျက်ခုံးတွေ မသိမသာ တမျိုး သိသိသာသာ တမျိုးလှုပ်နေပါတယ်လို့.. မေးတော့လည်း ပြောပြရတော့မှာပေါ့နော်… ဒါပေမယ့် ခဏတော့စောင့်.. ပြီးမှ လက်တို့လိုက်မယ်..
ချစ်လေပြေ, on February 4, 2008 at 9:34 pm said:
အမလေး ကျောချမှ ဓမြမှန်းသိ ဆိုသလို ဖတ်ကောင်းကောင်း နဲ့ ဖတ်လာတာ၊ နောက်ဆုံးတော့ သူက သူများတွေကို တက်လိုက်တာ ပေါ့လေ၊ ကိုယ်ကို ကိုယ် အတက် ခံရဖို့များ အပိုင်းသုံးထိ စောင့်ဖတ်နေ ရတယ်လို့ ၊ မှားပါတယ် အမ ပုတုရယ်၊ ရေးဆိုတော့လဲ ရေးရမှာပေါ့၊ ကံကောင်းတဲ့ သူတွေကတော့ ပြောအားရှိတာပေါ့၊ ရေးပါ့မယ်နော်၊ ရေးပြီးရင် လာအော် လိုက်မယ်၊ တိလား၊
soemoethu, on February 5, 2008 at 8:29 am said:
မမကအရမ်းကံကောင်းတာဘဲနော်..မမလိုချင်တဲ့ကိုက်ညီမှုတွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ဘဝလက်တွဲဖေါ်ကိုလဲရ…ပျော်စရာကြီး..အားကျလိမ့်တာ..ဟီး..မမ ရဲ့tag game ကိုလဲအားပေးရမယ်..ပျော်ရွင်ပါစေမမ
MyaYwetWai, on February 5, 2008 at 4:22 pm said:
ဟိုက်!! မရောက်တာ နဲနဲကြာလို့ လာခဲ့တာ တတ်ဂိမ်းနဲ့ တိုးနေပါ့လား။
သူချစ်ကိုယ်ချစ် မလေးမတို့ဇနီးမောင်နံ အိုအောင်မင်းအောင် ပေါင်းရပါစေ။ တီတီတာတာလေးတွေလည်း အများကြီး တိုးပွါးပါစေ။
တက်ထားတော့ ရေးပါ့မယ်။ ဖြေးဖြေးပေါ့နော်။ ဘာမှတော့ ထူးထူးခြားခြားမရှိပါဘူး။
မင်းကျန်စစ်, on February 5, 2008 at 6:33 pm said:
ကိုးနတ်ရှင်မကောင်းလို့ဆိုပြီး နှပ်နေတာကြာပြီ 😛 ခုတော့ ရတော့ဘူး ခုသူငယ်ချင်းတွေ အဆောင်ရောက်နေလို့ ရေးရဲသေးဘူး။ လိုက်နောက်ကြမှာ သိနေလို့။ ပြန်ရောက်တာနဲ့ ရေးမယ် အမရေ။ ဒီအကြောင်းတွေကတော့ ရင်ထဲမှာ အပေ့ အပေ့ 😀
tzm, on February 6, 2008 at 2:46 pm said:
မမလေးရေ… ရေးပြီးပြီနော်.. လာဖတ်ဦး
ပန်ဒိုရာ, on February 6, 2008 at 5:17 pm said:
လေးမ ချစ်တဲ့ ဘ၀လက်တွဲဖော်နဲ့အတူ သာယာပျော်ရွှင်သော လမ်းကို ခရီးများဆုံးထိ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ
ပုံရိပ်, on February 7, 2008 at 8:22 am said:
ကံကောင်းသော မလေးမ ချစ်သောသူနဲ့ အိုအောင် မင်းအောင် ပေါင်းနိုင် ပါစေ 🙂
tu tu, on February 7, 2008 at 11:41 pm said:
မျှားပြာ, on February 8, 2008 at 2:38 am said:
ကာလသားဘ၀က ကုန်သွားပီလို့ထင်တာပဲ ရေးဆိုတော့လည်း ရေးရတာပေါ့ .. ရွာက မိန်းမနဲ့ ကလေးတွေပါ လိုက်လာအောင် ရေးပစ်ဦးမယ် ဟတ်ဟတ်
မေပျို, on February 8, 2008 at 9:01 pm said:
နောက်ဆုံးမှာမှ ကပ်ပါသွားရတယ်လို့။ ဘာရေးရင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစားလိုက်ဦးမယ်။ အမက အသက်၂၀ကျော်ရင် စဉ်းစားတဲ့ လက်တွဲဖော်အကြောင်းရေးဆို။ သဲကအခုမှ ၁၉တောင်ပြည့်ပေးဝူးဗျ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင်။ ဟီး
မလေးမချစ်တဲ့လူနဲ့ အိုအောင်မင်းအောင် ပျော်ရွှင်စွာ ပေါင်းဖက်ရပါစေနော်။
မျက်လုံး, on February 16, 2008 at 1:00 am said:
မလေးမရေ။ မတက်နိုင်သေးတာ ခွင့်လွှတ်ခင်ဗျ။ ရေးဖြစ်အောင်တော့ ရေးမယ်။ ကြာဦးမယ်ခင်ဗျာ။ မလေးမရဲ့ လက်တွဲဖော်နဲ့ အတူတကွ ထာဝရ ပျော်ရွှင်ပါချမ်းမြေ့ပါစေခင်ဗျာ။
ဂျယ်ရီ, on February 19, 2008 at 7:05 pm said:
ဟိုက် ။။ အိုင်တို့ကို အီကောင်ပီလောင် ဆိုပါလား ။
ကိုသန့်လည်း ၀ီပလွေကြီး ဖစ်တွားပြီ ။ ဟစ် ဟစ် 😀
ရေးရပေမပေါ့ ။ ကျေးဂျူး
ShwunMi, on March 1, 2008 at 12:59 am said:
ခုမှပဲ မလေးမရေ . . .
THS, on November 24, 2008 at 12:10 am said:
မျက်ရည်လက်နက်ကိုမကြာခဏထုတ်မသုံးပါဆိုတော့ လိုအပ်တဲ့အခါမှ ထုတ်သုံးမယ်ပေါ့
ဟီဟီ ၊ အစ်မတို့ ရာဟုတို့က အဲဒါတစ်ပန်းသာပဲ 🙂 😛